ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > လာပြီးသောက်ပါ
Beachten Sie die Worte des Propheten Jesaja: «Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende» (Jesaja 55,10-11) ။
Kommt Ihnen das bekannt vor? Denken Sie an den Fluch, als Adam und Eva aus dem Garten Eden verstossen wurden: «Mit Mühsal sollst du dich von ihm, dem Acker, nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen» (1. ကြွက် 3,17-18) ။
ဤအခန်းငယ်များတွင်သဲကန္တာရနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများထက်ကောင်းချီးများနှင့်ကြွယ်ဝခြင်းဂတိတော်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်အနောက်ဘက်၌ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များသည်ဖြည့်ဆည်းမှုထက်ပိုများသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာမိုးခေါင်တာ၊ ဆူးတွေဆူးတွေရှိနေသေးတယ်။ ငါတို့ကဝိညာဉ်တွေရဲ့သဲကန္တာရထဲမှာနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ကျနေသောကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌အဖိုးတန်မိုးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘုရားသခင်၏အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသည်းအသန်လိုအပ်သည်။ ကျိုးပဲ့သောအသိုင်းအဝိုင်း၊ ၀ တ်ပြုခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်သောအာဟာရနှင့်အားကောင်းစေသောနေရာများဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ရေဆာနေလား။ မနာလိုမှုမှကြီးထွားလာသောဆူးများ၊ ဒေါသများနှင့်ပေါက်နေသောဆူးပင်များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ စိတ်အလိုမကျမှုများနှင့်ရုန်းကန်မှုများမှဖြစ်ပေါ်လာသောမိုးနည်းသဲကန္တာရကိုငြီးငွေ့နေပါသလား။
ယေရှုသည်လတ်ဆတ်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လာ၍ အမြဲစီးဆင်းနေသောရေအချို့ကိုသောက်ပါ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာကြီးကိုရှင်သန်စေသည်။
Greg Williams က